10 Izimpawu zomhlaba ezidume kakhulu ukuvakashelwa | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izimpawu zomhlaba ezidume kakhulu ukuvakashelwa
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Kuyamangaza ekwakhiweni kwezakhiwo, ocebile emlandweni, ku amadolobha amahle kakhulu emhlabeni, le 10 izimpawu zomhlaba ezidume kakhulu ukuvakashelwa ngesitimela okufanele zibe kuwe uhlu ibhakede. Ukusuka eYurophu kuya eChina, ngesango elidume kakhulu laseBerlin, nakuMuzi Onqatshelwe, nayi inyonyobheka yezimpawu ezizokushiya umangele.
1. I-Eiffel Tower eParis
Kunzima ngempela ukuphuthelwa yilo mlando omangalisayo, 300 imitha ephakeme yensimbi. Noma uhambahamba eLe Marais, UMama wethu, noma ikota yesiLatini, lesi sithonjana esikhulu seParis sizobonakala ngaso sonke isikhathi.
Ngakho, uma uya eParis okokuqala, nakanjani uzovakashela i-Eiffel Tower emini nasebusuku ukuze ubone i-Eiffel yonke ikhanyisiwe. Ngakho-ke, kufanele ukulungele kahle ukuvakasha kwakho futhi wazi ukuthi indlela engcono yokuya e-Eiffel Tower eParis, noma kuphi eYurophu.
Ungafika Kanjani Ku-Eiffel Tower Ngesitimela?
Okuhamba phambili ukuya e-Eiffel Tower ngesitimela. I izinto zokuthutha umphakathi Uhlelo eParis lusebenza kahle futhi lukhululekile. Ukuhamba ngaphesheya kwe-arrondissements nezimpawu zomhlaba kulula kakhulu, kanye nendawo emaphakathi ye-Eiffel Tower edolobheni kusho ukuthi ixhumeke kahle kujantshi waseFrance.
I-Champ de Mars / Tour Eiffel yisiteshi sesitimela esiseduzane, kanti i-Eiffel Tower ilungile 2 ukuhamba imizuzu usuka esiteshini. Nokho, ukwehla esiteshini iTrocadero kuzohlinzeka ngemibono eminingi yemilingo yombhoshongo kanye neSeine. Ungathatha i-RER Line C uye ku-Eiffel Tower njalo ngemizuzu embalwa, futhi ithikithi likaMasipala lohambo olulodwa ngu- € 1.9.
2. Izimpawu Ezihlabahlosile Eziningi Zokuvakashelwa Ngesitimela: Udonga Olukhulu LweChina
Umaki womhlaba omkhulu kunayo yonke eyenziwe ngumuntu, iGreat Wall yaseChina yathatha izintambo 2000 iminyaka yokwakha. Ukwakhiwa kodonga kokuqala kwaqala ekuqaleni kwekhulu lesi-7, kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwengezwa izindonga ezengeziwe ukuqinisa nokuguqula iGreat Wall yaseChina ukuthi ibe ngolunye lwezimpawu ezinkulu nezikhathaza ingqondo emhlabeni.
Njengoba iGreat Wall yaseChina inkulu kakhulu, ungayithanda kwabaningi izindawo ngaphesheya kweChina, futhi ingathatha kuze kufike ku- 175 izinsuku zokuliwela ngokugcwele. Nokho, indawo enhle yokubabaza iGreat Wall yaseChina yiBeijing, amadlelo aseBeijing, namadolobha afana neBadaling. ukuze uphethe, Udonga Olukhulu lobukhulu baseChina, ukubaluleka komlando, futhi ukwakheka kwalomhlaba kukwenza kube ngenye ye 10 izimpawu zomhlaba ezidume kakhulu ukuvakashelwa ngesitimela.
Ungafika Kanjani KuDonga Olukhulu LweChina Kusuka Beijing?
Kufanele Uhambe uye eSiteshini SaseHuoying ngomgwaqo ongaphansi komhlaba noma uthathe ulayini we-Airport Express. Ngemuva kwalokho ukusuka eHuangtudian Railway Station thatha isitimela i-S2 uye eBadaling Railway Station. Uzobona ukungena kuDonga Olukhulu ekuhambeni kwemizuzu engama-20 ukusuka esiteshini sesitimela.
3. Izimpawu Ezihlabahlosile Eziningi Zokuvakashelwa Ngesitimela: ISistine Chapel Vatican City
Amafresco amahle kaMichelangelo abe izivakashi ezimangazayo iminyaka eminingi. ISistine Chapel in Vatican City kungcono ukuvakashela ngoLwesihlanu kusihlwa nobusuku ehlobo lapho kungaminyene kakhulu. Umsebenzi wobuciko omkhulu emhlabeni utholakala ngeminyuziyamu yaseVatican, futhi awudingi ukubhuka isikhathi ukuze ungene.
ISistine Chapel iqanjwe ngoPapa wesithupha, owayakha ngekhulu le-15. Ngakho, AmaFrescoes ahlobisa uphahla eSistine Chapel aveza izinganekwane ezisencwadini kaGenesise. Ngemivimbo kapende nemibala ephawulekayo, amafresco agcinwe kahle, futhi ungachitha kalula usuku lonke ubabaza izigcawu.
Ungafika Kanjani Esontweni LaseSistine Elivela ERoma?
ISistine Chaple iseVatican City, ngaphandle kweRoma. Ngakho-ke, uma uvakashele eMilan, IFlorence noma enye indawo eYurophu, kufanele uqale uthathe ifayela le- isitimela sejubane elisheshayo eRoma. Khona-ke, thatha isitimela usuka eRomantic Tiburtina uye e-Roma St.. Isiteshi sePietro, futhi kuba 14 ukuhamba imizuzu eya eSistine Chapel.
4. UCharles Bridge Prague
Kusuka eBudapest noma eVienna, akukaze kube lula ukuya eCharles Bridge kusuka kunoma iyiphi indawo eYurophu. Lokho akumangazi, ngokucabangela iqiniso lokuthi iCharles Bridge ePrague ingesinye sezimpawu ezaziwa kakhulu ukuvakashelwa ngesitimela. Ibhuloho lamatshe le-gothic, eziqoshiwe, indawo ephakathi kweMala Strana nedolobha elidala, yizizathu ezimbalwa nje zenkazimulo yayo.
Ngaphezu kwalokho, ICharles Bridge ingelinye lamabhuloho amahle kakhulu futhi amadala kunawo wonke eYurophu. Ngakho-ke, uzohlangana namakhulu abavakashi abafuna okungcono kakhulu I-Instagram pic indawo eBhulohweni. Yebo, nganoma yisiphi isikhathi sosuku nonyaka, uzobe ujoyina izivakashi eziningi ePrague ukubabaza enye yezindawo ezidume kakhulu emhlabeni.
Ungafika Kanjani KuCharles Bridge Ngesitimela?
Izincwajana zemininingwane travel eYurophu kukhululeke kakhulu futhi kuyashesha, ukuze ukwazi ukuya eCharles Bridge kusuka kunoma yimaphi amazwe angomakhelwane. Kusuka esiteshini esikhulu sesitimela (Ngolimi lwendawo: Isiteshi Esimaphakathi), imayelana 13 imizuzu ngemetro eya eCharles Bridge. Ungase futhi ufike lapho ngezinyawo, kuba 25 ukuhamba imizuzu eya eCharles Bridge usuka esiteshini sesitimela, kepha kunconywe kancane uma ufika kusuka eDresden, Budapest, noma iZermatt.
5. Izimpawu Ezihlabahlosile Eziningi Zokuvakashelwa Ngesitimela: St. Basil's Cathedral eMoscow
Enye yezinto ezinhle kakhulu izikwele ezibabazekayo emhlabeni, iRed Square eMoscow iyikhaya lesonto elikhulu elimangalisa kakhulu. St. IBasil's Cathedral iyamangalisa, nge 6 amasonto, idwetshwe kahle nangobuciko emaphethini wejometri. I-cathedral enhle kakhulu inhle ngaphakathi nangaphakathi, nayo yonke indlu yesonto ehlotshiswe ngemidwebo nemidwebo.
St. ICathedral yaseBasil ingesinye sezithonjana eziphezulu zaseMoscow futhi yakhiwa njengophawu lokunqoba lokwehlulwa kukaTerrible Ivan, uKhan waseKazan. Ngakho, kusukela 1561 iheha izigidi zabavakashi minyaka yonke ukuze kubukwe 1 zezimpawu eziphawuleka kakhulu eRussia.
Ungafika Kanjani eSt. Basil's Cathedral?
ISathed Basil's Cathedral iseRed Square, futhi ungathatha umgwaqo ongaphansi komhlaba usuka esiteshini saseLeningradsky uye e-Okhotny Ryad. Uma ufuna ukubona okuhle kakhulu kweRussia, bese kuba isitimela esinejubane esivela eSt. Petersburg yindlela ekahle yokuhamba.
6. IPeterhof Palace eSt. Petersburg
IVersailles yaseRussia yakhiwa nguPeter the Great njengezwe lakhe. Ku- uhambo oluya ePeterhof Palace, uzovakashela iLower Park, Ingadi Ephezulu, Isiteshi Sasolwandle, nezigodlo ezimbili ezincane – Monplaisir kanye neMarli Palace. Peter the Great evakashele iVersailles ngawo-1770s futhi wabona umsebenzi wobuciko waseFrance waba esinye sezimpawu ezaziwa kakhulu eRussia namuhla.
Isigodlo seTsar sidume kakhulu ngemithombo, Imifula emikhulu, izithombe zeBhayibheli, nezingadi. AmaJalimane asicekela phansi lesi sigodlo esihle e-WWII kepha asilungisa ngempumelelo ukuze abe yi- UNESCO amagugu wezwe isayithi.
Ungafika Kanjani KuPeterhof?
Isigodlo iPeterhof singesinye sezimpawu ezihamba phambili zokuvakashela eSt. Petersburg. Ungahamba uye ePeterhof ngesitimela ukusuka eBaltiskiy Station kuye eNoviy Peterhof Station.
7. Izimpawu Ezihlabahlosile Eziningi Zokuvakashelwa Ngesitimela: IRoma yaseColosseum
IColosseum ingesinye sezimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba wanamuhla, Ngakho-ke, kungcono ukuvakashela iColosseum ngohambo oluqondisiwe. kungenjalo, le wonke umlando ocebile kwalokhu kwakhiwa okuhle kuzolahlekisela wena. Ababusi baseFlavia bakha lo msebenzi wobuciko wobuciko njengendawo yokudlala, ngomqondo wokuvikela izixuku emvuleni nasemoyeni, engqondweni.
Namuhla ungavakashela wonke amazinga eColosseum, noma uyithande kusuka ezindaweni zokudlela eziningi nezindawo zokudlela ezinhle eziseduze. Ngaphezu kwalokho, i-colosseum enkulu kunazo zonke ezake zakhiwa, isetshenziswa namuhla njenge bukhoma amakhonsathi omculo indawo. Lapha, uzobona amagama amakhulu emhlabeni womculo, njengo-Elton John.
Ungafika Kanjani eColosseum?
Ungafinyelela eColosseum ngazo zombili izikhumulo zezindiza eRoma, ngesitimela. Kukhona izitimela ezihamba njalo 15 imizuzu eya esiteshini saseTiburtina, bese kuthi ngomgwaqo oqonde ngqo kulesi sithonjana sase-Italy. Ngokusobala, kulula kakhulu ukufika eColosseum kusuka esikhungweni esinomlando eRoma.
IPisa eya eRoma ngesitimela
8. Izimpawu Ezihlabahlosile Eziningi Zokuvakashelwa Ngesitimela: Isigodlo saseWestminster eLondon
Indawo ephawuleka kakhulu eNgilandi yiWestminster Palace neBig Ben Tower. Izindlu zePhalamende. IVictoria Tower nombhoshongo odume kakhulu emhlabeni, uBig Ben, yakha ingqophamlando edume kakhulu eNgilandi.
Ebheke eMfuleni iThames, ngokuhehwa kweLondon Eye eduze, isimo esiseduze neWestminster Palace sihle kakhulu. Ukubukwa okumangalisayo kwepanoramic, vakashela iLondon Eye unyaka wonke, ngoba ukungena eWestminster kungenzeka ngeMigqibelo kuphela, ngoJulayi nango-Agasti.
Ungafika Kanjani Esigodlweni saseWestminster neBig Ben?
Thatha ulayini wombuthano wesiyingi uye eziteshini zaseWestminster noma iTrafalgar. Uma ufika usuka emadolobheni aseLondon, noma yikuphi e-UK noma eYurophu, lapho-ke iSouth Western Railway izoba yindlela engcono yokuhamba.
9. Idolobha Elinqatshelwe eChina
Enhliziyweni yeBeijing, uzothola umnyango wesigodlo esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Kukhulu kunoPeterhof, iLouvre, IKremlin, neVatican, i-Forbidden City Palace ine 980 izakhiwo zesigodlo okufanele zihlolwe. Ngokuphambene nezinye izimpawu zomhlaba, lena yonke yenziwe ngokhuni. nge 25 Ababusi baseChina babehlala esigodlweni phambilini, iDolobha Elinqatshelwe lingumnyuziyamu omkhulu kunayo yonke emhlabeni.
Indawo ephawuleka ngokwedlulele izuze igama layo ngokulunga kulezi zinsuku. Lokhu kungenxa yokuthi 40% yesigodlo kusenqatshelwe izivakashi. Nokho, usengayibona yonke inkimbinkimbi ukusuka esiqongweni sentaba eJingshan Park. IDolobha Elinqatshelwe kungenzeka lingabi elinye le izigodlo ezinemibala eminingi nezinhle eYurophu, kodwa kuyathakazelisa kakhulu.
Ngifika Kanjani Edolobheni Elinqatshelwe?
IShanghai iya eBeijing cishe 5 amahora ngesitimela, kodwa eBeijing, ungathatha i-metro uye eDolobheni elingavunyelwe.
10. Izimpawu Ezihlabahlosile Eziningi Zokuvakashelwa Ngesitimela: IBrandenburg Gate Berlin
Isango laseBrandenburg liyindawo ebaluleke kakhulu eBerlin, njengoba kuwuphawu lwe-Iron Curtain futhi kwake kwahlukaniswa iBerlin. Isango ekuqaleni lalakhiwe inkosi yasePrussia uFrederick William II, ngekhulu le-18. Ngakho, indlela enhle yokufunda ngomlando ngemuva kwalesi sithonjana, kafushane nangesikhathi uhlangana nabanye abahambi, kungohambo lokuhamba lokuqondisa.
Ntambama nangezimpelasonto, iParis Platz iba yisiteji sabaculi nabaculi abaningi bendawo. Ungabona futhi abantu bendawo behamba ngamabhayisikili ngesango futhi behleli nje, bexoxa, ukulinda imisebe yelanga ukubuka ngesango.
Ngifika Kanjani EBrandenburg Gate?
Indlela elula kunazo zonke yokuhambela eBrandenburg Gate ngemigqa kaS-Bahn, uhlelo lwesitimela. Thatha noma yimuphi umugqa oya esiteshini saseBrandenburger Tor.
Ukuphetha, indawo, ukubaluleka komlando, izakhiwo, futhi ubukhulu balezi zimpawu zomhlaba ziheha izigidi zabavakashi minyaka yonke. Njengoba umi phambi kwayo yonke indawo, e-Europe, Russia, noma eChina, umane umangazwe ubuhle nokudalwa kwayo yonke indawo eyodwa.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele eyodwa yalezi 10 izimpawu zomhlaba ezidume kakhulu emhlabeni ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izimpawu Zokukhangisa Eziyi-10 Ezidume Kakhulu Ukuvakashelwa Ngesitimela” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / fr noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
FamousLandmarks Landmarks mostfamouslandmarksineurope Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ukuhambahamba